Atụmatụ akuku Chinese Schizandra, esi akụ osisi - Chinese Lemongrass - 2019
Isi ihe nke lemongrass chọrọ bụ ezigbo ala drainage, ọ bụghị "oke" nke na-akụ ma na-esote olulu miri maka akuku. Lemongrass kacha hụ mpaghara ọhịa ndị na-eme mkpọtụ na ndị na-ebu ibu, ugwu ugwu dị ala. Ọ bụ ihe na-esighi ike izute ndị China lemongrass na ohia. Echefula na osisi ahụ nwere ebe dị ọkụ.
Kedu otu esi ahọpụta saịtị
Kedu oge kacha mma ịkụ osisi na ihe mere
Esi họrọ oke ihe akuku
Atụmatụ nke kụrụ Schizandra Shia
Kedu ka esi eto lemongrass si na nkpuru
Mkpụrụ nkwadebe na nchekwa
Ịgha mkpụrụ nke Chinese lemongrass
Esi lekọta seedlings maka seedlings
Nhọrọ ala maka ọrụ ebube
Ọtụtụ mgbe, ndị na-elekọta ubi na-atụ aro ka ha kụrụ Chinese lemongrass n'ala, bụ ebe ha na-etolite ubi na ubi. Ala jupụtara na mmiri ha ma "nyere aka" ịkọ osisi a. Ala ga-ahọrọ rụrụ, na mmiri dị mma. Nnukwu ala acidic ga-eme ka osisi ahụ. Iji mee ka lemongrass na-eto ma na-atọ gị ụtọ, ịkwesịrị ịmepụta ọnọdụ dị nso na ọnọdụ okike. Mgbe ị na-akụ, gbalịa izere ihe ndị na-adịghị ekwekọ ala. Maka ezi uto, a ghaghị iji mmiri na-agbanye ala.
Ị ma? Ọ bụrụ na ọ gaghị ekwe omume ịhọrọ ala ziri ezi, ị nwere ike ịmepụta n'onwe gị: jiri akwa 50 cm, wụsa ngwakọta ụrọ n'elu bed gị: sod, akwukwo ụwa na ala ojii.
Ọ bụrụ na ala gị bụ ụrọ, ọ ka mma iji "ájá" tụgharịa ya, ọ bụrụ na ájá dị n'ala - tinye ụrọ, ma ọ bụrụ na ala na saịtị gị bụ akọrọ - tinye obere lime.
Lemongrass Chinese chọrọ nnabata na iwu ndị pụrụ iche na-akụ ma na-elekọta osisi ahụ. Ọdịnihu nke osisi gị n'ọdịnihu ga-adabere ọ bụghị nanị na ala ị na-akụ osisi gị, kamakwa otu esi achọ ebe ziri ezi maka Schisandra. A ghaghị kụrụ Lemongrass n'ebe a na-echebe ya nke oma na mmiri oyi.
Isi ihe maka nlekọta nke lemongrass bụ nkwado, ya mere lemongrass na-eto nke ọma na nso ụlọ mkpọrọ na arches. Ọ dị ezigbo mkpa idobe lemongrass n'ebe ọ na-enweghị onyinyo, ma n'oge izu mbụ nke ọzụzụ kpụ ọkụ n'ọnụ osisi nwere ike pritenyat maka awa 2-3 n'ụbọchị.
Ọ dị mkpa! Zere ikuku lemongrass n'okpuru ụlọ, n'ihi na mmiri nke si n'elu ụlọ ahụ na-asọpụta ga-emerụ ahụ ike nke osisi gị.
Ọ kacha mma ịkụ osisi ahụ n'ebe ọdịda anyanwụ ma ọ bụ n'akụkụ ọwụwa anyanwụ nke ụlọ. A ghaghị ịzụlite ebe a na-ebute ebe a na-ebute ya. Iji mee ka gị lemongrass na-eto ma na-atọ gị ụtọ, ebe a na-ebi "ndụ" ga-ekpochapụ akwụkwọ ndị dara ada, ebe ọ bụ na ọtụtụ nje bacteria na ọrịa ndị dị n'ime ya.
Iji nyere aka n'ịzụlite osisi ahụ, ọ dị mkpa ka ị mara mgbe ị ga-akụ lemongrass. Oge akuku nke lemongrass dị iche na-adabere na mpaghara ebe ị bi: ọ bụrụ na ị bụ onye na-elekọta ndị agha, ọ kachasị mma ịkụ osisi ahụ n'ọnwa Ọktoba, maka mpaghara ndị ọzọ ọ ka mma ịkụ lemongrass ke mbubreyo April - mmalite May. Ihe dị otú ahụ bụ n'ihi eziokwu ahụ dị na ndịda na ụwa dị ọkụ karị, na mkpụrụ ndị a kụrụ n'oge mgbụsị akwụkwọ na-agafe site n'okike.
Mkpụrụ nke Schisandra Chinese, yana osisi, kwesịrị nlezianya họrọ, ebe ọ bụ na ahụike nke osisi gị na-adabere na ya. Mkpụrụ osisi kasị mma ịhọrọ "ndị okenye", nke dị afọ 2-3, ebe ọ bụ na usoro mgbọrọgwụ ha ka mepụtara. Mgbe ị na-azụta sapling, ṅaa ntị n'eziokwu ahụ bụ na rhizome adịghị akọrọ ma gwuo ya n'ala.
Na-eto eto Chinese Schisandra site na mkpuru osisi na-achọkwa iche iche nke ịkụ ihe. A pụrụ ịzụta mkpụrụ osisi Lemongrass na nurseries, dị iche iche na-echekwa. Mkpụrụ osisi dị mma bụ odo na-egbukepụ egbuke egbuke na akụrụ.
Ọ dị mkpa! Mkpụrụ dị arọ nke nchịkọta mkpụrụ bụ ihe dịka 20 g kwa 1000 mkpụrụ. Ọ bụrụ na ụlọ ahịa ahụ nyere gị ngwugwu nke karịrị 40 g, o yikarịrị ka osisi ndị ahụ adịghị mma.
Ọ bụrụ na ị kụrụ ọtụtụ osisi, akụkụ nke ise abiala ebe, echegbula onwe gị: ọka a na-enweghị ihe ọ bụla na-eme nke ọma na mkpụrụ nke schisandra, ya bụ, ọ dịghị ihe mgbochi ma ọ bụ nkwụsịtụ na mkpụrụ. Echefula nke ahụ mkpụrụ osisi niile ga-emerịrị tupu akuku (eke - mgbe ọdịda na ọdịda; artificial - mgbe ọdịda na mmiri).
Akuku atụmatụ na-adabere n'otú ị ga-esi kpebie ịkụ lemongrass - mkpụrụ osisi ma ọ bụ cuttings. Nke mbụ na-agagharị na ahịhịa vegetative - 15-20 ụbọchị tupu akuku, igwu onu 40 cm miri, 40-60 cm ke dayameta, ebe ị ga-akụ lemongrass. A ghaghị ịwụ ụgbọ mmiri na ala olulu, ma jikọta ala sod, humus na compost n'elu. Ugwo olu nke seedling kwesiri igbanye ala.
Mgbe na-eto eto lemongrass site na mkpụrụ mkpụrụ atụmatụ bụ dịtụ iche: Nke mbụ, anyị na-akụ mkpụrụ ahụ, mgbe ahụ, anyị na-atụgharị ma na-akụ n'ime ala site na aka, n'ime uzo.
Chinese lemongrass osisi na ọdịda ha chọrọ nkwadebe pụrụ iche na nrubeisi na ọtụtụ iwu.
Ị ma? Iji chọpụta mkpụrụ nke osisi ahụ n'oge mbụ, onye kwesịrị ịhapụ ndị na-ese n'elu mmiri mgbe ha na - echefu - ha dị nfe ma ghara ịmalite.
Tupu ịkọ lemongrass na mmiri na osisi, ha kwesịrị ịdị njikere.
A na-edozi nkwadebe mkpụrụ na nkebi abụọ: tụnyere mmiri (mkpụrụ n'ime ihe jupụtara na mmiri na okpomọkụ dị n'ime ụlọ na-ahapụ maka ụbọchị 7-10). Mgbe ochichi biara bu ihe siri ike, nke dabere na ntoputa nke seedlings, - stratification. Maka usoro a, ịkwesịrị ịkwadebe ájá tupu oge eruo, kpochaa ya, gbakwunye mkpụrụ n'ime ọkwa 1: 3. A na-echekwa ngwakọta a n'ime ụlọ na okpomọkụ nke 18-20 Celsius C.
Ihe ọzọ na-esote bụ snow mgbatification. Ọ bụrụ na ị nweghị snow, ị nwere ike dochie anya ya: tinye ihe ndị nwere mkpụrụ maka ọnwa 2-3 n'ime okpuru ala, kpuchie akpa ahụ. Ọ bụrụ na ị ka jisiri ike ịchọta snow - ịkwesịrị ịsaba ájá na ájá nke snow ma mee ya n'ọnọdụ a maka ihe dị ka otu ọnwa n'okpuru "mkpuchi". Ọ bụrụ na ị na-agbaso iwu ndị a maka nkwadebe, mkpụrụ ga-eto ma ị ga-ejedebe na mkpụrụ osisi.
Mgbe akuku lemongrass ọ dị mkpa ime ka etinyerịrị 1.5-2 cm miri n'ala. Site n'elu, a na-fesa mkpụrụ osisi ndị a na-ekpo griin na ubé dị ka mmiri.
Ọ dị mkpa!Ekwela ka ogbugba mmiri nke osisi n'oge akuku - ha nwere ike ịmalite ire ere, n'ihi na ha nwetara mmiri zuru ezu n'oge stratification.
Ilekọta seedlings bụ oge kwesịrị ekwesị, mgbe niile, ọ bụghịkwa ụba nke ukwuu, nke mere na elu elu adịghị akpọnwụ. Otu ugboro n'izu, ịchọrọ ikuku "ikuku" ma wepụ ala. Mgbe ihe dịka izu abụọ, ị ga-achọpụta mkpụrụ mbụ, mgbe nke a gasịrị, a ga-akwaga mkpụrụ osisi ahụ na windo ahụ, a ga-eji ya kpuchie iko ya. Mkpụrụ osisi a kụrụ osisi nwere ike ịbụ mgbe ọdịdị nke okpukpu abụọ toro. N'ututu na n'anyasị, a ghaghị iji mmiri mee ka a ghachaa seedlings, ma ọ bụghị nke ukwuu.
Ọ bụrụ na osisi gị si "germ" na-enweta ezi na nlekọta anya, na nsogbu na mmepe nke lemongrass agaghị eme na osisi gị ga-enwe obi ụtọ na mkpụrụ osisi dị ụtọ na akwụkwọ osere, nakwa dị ka ihe mara mma.
Mụbaa ọmụmụ site na iji akwa Rosum
Ihe eji eme ihe nke ndi mmadu
Kedu ihe bara uru hibiscus? Njirimara, akara, uru na nsogbu
Copyright 2019 \_ Onye ọrụ ubi na-elekọta anụ ọhịa \_ Atụmatụ maka ịkụ Chinese lemongrass: esi eto lemongrass si seedlings na osisi